पब्जि खेल्दाखेल्दै एक्कासी यसरी भयो मृ, त्यु? Plz फोटो छोएर Rip लेखीदिनु होला? - ABNews Nepal
धर्म/संस्कृति प्रविधि मनोरञ्जन विचार समाचार समाज
पब्जि खेल्दाखेल्दै एक्कासी यसरी भयो मृ, त्यु? Plz फोटो छोएर Rip लेखीदिनु होला?
Sep 7, 2021 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, headline nepal, nepali tik tok star, taja khabar nepal, tajakhabar
१८ वर्षका युवक पबजी गेम खेल्दाखेल्दै यतिसम्म उत्साहित भए कि उनलाई अचानक हृदयाघात भयो र उनको मृ, त्यु भयो । भारतको मध्य प्रदेशको देवास जिल्लाका १८ वर्षकादिपक नामका किशोर गेम खेल्दाखेल्दै अति उत्साहमा जोडले चिच्याए ।
त्यसपछि अचे, त भएका उनको हृदयाघातका कारण मृ, त्यु भयो । देवासको औद्योगिक क्षेत्र शान्तिनगरमा बस्ने ११ कक्षामा छात्र दीपक गेम खेल्दाखेल्दै अचानक चिच्याएका थिए ।
भारतीय मिडियाका अनुसार गेम खेल्दाखेल्दै अचानक चिच्याएर अचेत भएका उनलाई परिवारले अस्पताल लगेका थिए तर अस्पताल पुग्दासम्म उनको मृ, त्यु भइसकेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिसले यसको जाँच सुरु गरेको छ
मिथुन राशीः यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नाम छ मिथुन राशी को । मिथुन राशी भएका मानिसहरु यदि आफ्नो कुनै योजना बनाउँछन्, उनीहरु निकै उत्साहित हुन्छन् र सिधै यसको निष्कर्षमा पुगेको सपना देख्न थाल्छन्।
उनीहरु आफ्ना साथी र आफ्ना लागि निकै ठूल्ठूला सपना देख्ने गर्दछन्, जुन थुप्रै पटक पूरा गर्न मुश्किल हुन्छ। समस्याः तर यदि कुनै कारणवश ती सपनाहरु पूरा नभए उनीहरुलाई निकै तनाव लाग्छ । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी बिना वा उनीहरुबाट टाढा भएर केही पनि सोच्नै सक्दैनन् ।
कर्कट राशीः यदि कुनै व्यक्तिले कर्कट राशी भएकाहरुसँग प्रेम सम्बन्ध निभाउने अवसर पाए बुझ्नुहोस् कि त्यस्ता व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । एक विश्वास पात्र र इमान्दार साथी के हुन्छ, त्यो कुरा कर्कट राशी भएका व्यक्तिसँग प्रेम गर्नेलाई थाहा हुन्छ । हद पार गरेर माया गर्छन, यी ५ राशि भएका व्यक्तिले !
सबैको छोरी यस्तै महान हुन बाबा र आमाको कि,रिया ग,रे,की छो,रिले भन्छ,न अब मेरो को,हि छैन
सं,खु,वासभा मा एकै घरका ६ जना लाई खे,दाइ खे,दाइ मा ,र्यो संखुवा,सभा घत,नामा पुग्दा